Sida Loogu Hormariyo Daacadnimada Macaamiisha Suuqgeynta Dijital ah | Martech Zone
Ma ceshan kartid waxaadan fahmin. Marka diirada la saaro helitaanka macaamiisha joogtada ah, way fududaanaysaa in lagaa qaado. Hagaag, markaa waxaad ogaatay istiraatiijiyad helitaan, waxaad ka dhigtay badeecadaada / adeeggaaga inay ku habboon yihiin nolosha macaamiisha. Soo jeedintaada qiimaha gaarka ah (UVP) way shaqeysaa - waxay sasabaa beddelaad waxayna hagtaa go'aamada iibsiga. Ma ogtahay waxa dhacaya kadib? Halkee ayuu adeegsaduhu ku habboon yahay ka dib dhammaystirka wareegga iibka?
Ka bilow fahamka dhagaystayaashaada
In kasta oo ay tahay wax lagu farxo in si joogto ah loo helo kanaallo cusub iyo dhagaystayaal wax loo iibiyo, haddana way ka qaalisan tahay in mid la sii haysto Si kastaba ha noqotee, sii haynta kuma tiirsana isla darawalada sida wax loo iibsado - ujeeddooyinka ka dambeeya way ka duwan yihiin, in kasta oo dabeecadda adeegsadaha iyo dareenka ka soo baxa labadan ay yihiin kuwo dhameystiraya haddana waa in si gooni ah wax looga qabtaa. Daacadnimada macaamilku waxay ka dhisantaa haynta. Helitaanka macaamilku waa uun albaab laga soo galo.
Qaadashada muhiimka ah halkan waa in la fahmo in macaamiishaadu aysan baaba'ayn ka dib wareegga iibka laakiin ay sii wadaan inay la macaamilaan badeecadaada / adeeggaaga oo ay ku xiraan khibradooda iyaga oo leh astaantaada.
Marka maxaad ka ogtahay macaamiishaada si sax ah?
Si aad u dhammaystirto sawirka habdhaqankaaga dhagaystayaasha kahor iyo inta lagu jiro wareegga iibka oo aad ku dhexgaliso natiijooyinka istiraatiijiyaddaada haynta, waxaad u baahan doontaa inaad ku darto xog badan. Maxay yihiin Qiyaasaha Xogta Xogta tixgelin la siiyaa? Waxaad ku bilaabi kartaa adiga oo qiimeeya:
Raadi Qiyaasta Suuqgeynta
Sidee isticmaaleyaashu kuu heli karaan? Maxay yihiin weydiimaha calaamadeysan / kuwa aan calaamadeysnayn ugu dambeyntii u horseedaya beddelaad ama barta iibsiga? Maxay ahaayeen bogagga soo dejinta ee ugu sarreeya iyo halkee buu ahaa masraxa ugu liidata? Miyaad ku xidhi kartaa qayb ka mid ah waxyaabaha gaarka ah ee gaarka ah ee shakhsiyadeed ee kuu keenay adiga qiyaasta ugu badan ee iibka?
Haddii aad hayso raadinta Google Analytics karti u yeeshay kuna dhexjiray Google Search Console, waxaad awoodi doontaa inaad si hoose ula socoto weydiimahan illaa 16 bilood ee la soo dhaafay isla markaana aad aqoonsato kuwa waxqabadka ugu sarreeya. Waad sii qoto dheereyn kartaa falanqaynta adoo ku xiraya ereyadan muhiimka ah bogag deg deg ah oo loo aqoonsado inay yihiin bilowga ugu wanaagsan ee safarka isticmaalaha ee ku aaddan soo iibsashada Tani waa la burburin karaa xitaa intaa ka sii dheer iyada oo la isku hagaajiyo xogtan ku saabsan demograafiga isticmaalahaaga, nooca qalabka, dabeecadda, iyo xiisaha si loo ogaado noocyada dhagaystayaasha ee ay u badan tahay inay beddelaan.
Sidee iibkaagu u shaqeynayaa? Waa maxay celceliska qiimaha dalabka ee aad sheegayso? Waa maxay celceliska qiimaha ee iibsigaaga soo noqnoqda? Maxay yihiin wax soo saarkaaga / adeegyadaada waxqabadka ugu sarreeya oo ma jiraan wax xiriir ah oo ku saabsan tirada dadka isticmaala iyo isbeddellada xilliyeed?
Haddii aad leedahay kor u qaadista raadinta E-commerce ee kor loo qaaday iyada oo loo marayo Google Analytics ama haddii kale dashboardka software-ka saddexaad, waxaad awoodi doontaa inaad la socoto dhammaan kuwan oo aad soo ururiso aragti qiimo leh. Waxa ugu muhiimsan ee maskaxda lagu hayo waa in qiyaasta iibka ay aad ugu kala duwan yihiin mugga qaybta la falanqeeyay. Iibka xilliyeed ama isbeddelku wuxuu u muuqan karaa wax aan caadi ahayn markii la eegay muddada gaaban, sidaa darteed indhahaaga ha furnaadaan oo jaangooyo xogta isla waqtiga ku jira muddada ka horreysa ama isla muddadaas sanadkii ka horreeyay.
Hannaanka Qaadashada iyo Gudbinta
Ma ogtahay halka ay macaamiishaadu ka yimaadaan? Maxay yihiin kanaallada aad wax ku iibsato? Iyagu ma yihiin isla kanaalladii ay kugu soo ogaadaan mise iyaga ayaa si fudud u ah kanaallada wada iibinta badankood? Maxay yihiin kanaallada keena dakhliga ugu badan?
Haddii aan u maleyno in websaydhkaagu yahay bartaada beddelka aasaasiga ah iyo inaad leedahay dejinta Google Analytics, waxaad si fudud uga jawaabi kartaa su'aalaha aan soo sheegnay. Booqo Qaadashada> Warbixinta guud si aad u aragto kanaalada keena baabuurta ugu badan uguna kacsan. Waad sii qoto dheereyn kartaa falanqaynta adoo ka beddelaya qeybta dhagaystayaasha Dhamaan adeegsadayaasha ilaa converters. Haddii aad leedahay wax ka badan hal ujeedo ama ujeedo kooxeed, waxaad sii kala jabin kartaa isbarbardhiga waxqabadka kanaalka iyo hadaf gaar ah.
Qofka Macaamiisha ah
Iyada oo dhammaan xogta kor ku xusan la jebiyey loona dhigay qaab dhismeed, waxaad hadda awood u leedahay inaad aragto nooca dhagaystayaasha ay u badan tahay inay beddelaan, jidadkooda xagga iyo ka dib barta beddelka iyo sida ay u dhaqmaan ka hor, inta lagu jiro iyo ka dib markay sameeyaan iibsasho.
Abuuritaanka shaqsi macaamiil ah matalaad khayaali ah oo ku saabsan macaamiishaada wanaagsan ayaa kaa caawin doonta inaad suuq geyso badeecadaada sifiican oo aad u fahanto waxa ku kallifay inay kuu doortaan inaad iibiye / adeeg bixiye yihiin. Tan waxaa sida ugu fiican loo sharxi karaa markii la muujiyo markaa aan tusaale u dhigno. Waxaad dhahdaa waad iibineysaa buugaagta cuntada lagu karsado hadafkaaguna waa inaad kordhiso tirada iibka isla markaana aad u dhiirrigeliso taxane cusub oo loogu talagalay Thanksgiving soo socda macaamiil cusub oo jira. Kee baa kuwaas kaaga fudud in aad suuq geyso?
“Waxaan jeclaan lahayn inaan ku dhiirrigelino [buuggan] taxanahan buug-karinta ah ee loogu talagalay Thanksgiving-ka Instagram iyo Pinterest. Bartilmaameedkayagu waa haweenka, da'doodu tahay 24-55 ee jecel inay wax karsadaan oo ay horay u iibsadeen ama ay tixgeliyeen iibsashada buug cunto karin ah sanadkan "
Hadafkeenu waa inaanu kobcino [buuggan] taxanaha ah ee ku saabsan Martha. Waxay ku sugantahay guriga hooyo 40-jirkeeda oo jecel inay karsato. Way jeceshahay #Foodporn bogagga oo ay ku wadaagaan cuntooyinkeeda Instagram. Iyadu waa muxaafid waxayna ku raaxeysataa qiyamka soojireenka ah sidaas darteed ciidaha waaweyn waa wax iyada u weyn maadaama ay yihiin waqtiga kaliya ee sanadka ee ay karin karto qoyska oo dhan iyo saaxiibadood. Martha mar hore ayey naga iibsatay buug cunto kariye ah waxayna hubineysaa quudintayada 'Instagram' iyo websaydhka loogu talagalay cuntooyinka ay soo saaraan bulshada ugu yaraan hal mar bishii. Runtii waxay ku jirtaa cunto gaabis iyo cunno dabiici ah. ”
Arag faraqa? Noocan wakiilnimada shaqsiyeed ee macaamiisha ah ayaa ah waxa aad ka heli karto cabbiraadaha kor ku xusan ee lagu duubay qaab-dhismeed.
Noocaan falanqaynta macaamiisha way adagtahay in la dejiyo waxayna maraysaa lakabyo kakanaanta. Haddii ay caqabado badan kugu tahay adiga, waa inaad xaqiiqdii caawimaad ka raadi hay'ad dijitaal ah oo khibrad u leh falanqaynta dhagaystayaasha horumarsan, qaybinta, iyo hagaajinta ololaha.
Inta badan Xeeladaha Suuqgeynta Ceyrinta ee caadiga ah iyo KPI-yada ay tixgalinayaan
Hadda oo aad ogtahay shakhsiyaadkaaga macaamiisha ah oo aad fahamtay dhaqankooda, siyaabaha aad uga shaqeyn karto sii haysashadooda ayaa aad u cad. Xeeladaha suuqgeynta haynta way kala duwanaan kartaa iyadoo kuxiran niche, suuqa, macaamiisha, iyo ujeeddooyinkaaga, laakiin qaabka aasaasiga u ah qeexitaankooduba waa sidiisii.
Xeeladaha suuqgeynta xajinta qaar ka mid ah weligood waa cagaaran yihiin waxaana la ansaxiyay marar badan. Dabcan, marka loo fiiriyo fikirka ay ku wadaan xogta lagu dhisay talaabadii hore.
In aan xuso dhawr.
Inkasta oo inta badan loo tixgeliyo sidii xeelad helitaan, SEO waxay bixisaa tirada fursadaha si loo hagaajiyo sii-haynta macaamiisha loona dhiso daacadnimo.
Tan waxaa badanaa lagu sameeyaa iyada oo la adeegsanayo waxyaabaha ku habboon - labadaba goobta iyo goobta. Adoo aqoonsanaya ereyada muhiimka ah, nuxurka iyo ilaha tixraaca ee macaamiishaadu ay la falgalaan oo ay la falgalaan, waxaad helaysaa tallaabo aad ugu dhowaaneyso inaad shakhsi ka dhigato waxyaabaha ku jira si aad u qabato oo aad u hayso feejignaantooda. Ka faa'iideyso cabbiraadaha suuqgeynta raadinta ee istiraatiijiyadda suuqgeynta haynta SEO iyo abuur khariidad wadadeed
Kaliya diirada ha saarin ereyada muhiimka ah ee dabada laakiin iskuday inaad sare u qaaddo ku habboonaanta mowduucyada la xiriira. Waxaad ku gaari kartaa tan adoo sahaminta ereyada muhiimka ah ee loo yaqaan 'LSI keywords' iyo ereyada ereyada muhiimka ah ee bartilmaameedsada xiisaha iyo ujeedada isticmaaleyaasha. Aynu ku noqonno Martha iyo dhiirrigelinta buugaagta cuntada. Mawduucyada aakhirka u horseedi kara Martha inay kaa iibsato buug kale oo cunto karis ah ayaa ah hababka cuntada karinta oo gaabis ah, bakhaarrada, iyo dheryaha lagu samayn jiray iyaga, xulashada maaddooyinka la sifeeyey xilliga ama qaabka ay u koray iyo u baakadeeyeen. Martha waxaa laga yaabaa inay horseed u noqoto inay iibsato buug cunto karis ah haddii ay isku muujiso inay laf dhabar u tahay qoyska oo ay u aragto miiska cashada inay tahay bar kulan, bulshada iyo qiyamka qoyska. Si fudud haku qasbin adeegsadaha inuu iskiis isu aqoonsado inay qayb ka tahay qayb weyn, laakiin iskuday inaad lashaqeyso khibradooda.
Qaar ka mid ah dhinacyada farsamada ee SEO, gaar ahaan marka laga hadlayo ku habboonaanta goobta sida websaydh adag iyo qaabdhismeedka macluumaadka oo leh HTML5 ansax ah iyo qaabaynta microdata qaabeysan ayaa ka caawi gurguurtada inay si fiican u fahmaan qaabdhismeedka iyo macnaha ka dambeeya. Tani waxay ka caawineysaa soo-helid iyo shakhsi ahaanshaha bogagga natiijooyinka raadinta iyadoo loo eegayo doorbidka isticmaalaha bartilmaameedka ah. Tusaale ahaan, astaamaynta websaydhka qaabdhismeedka iyo macneyaasha ayaa gacan ka geysan doonta sidii natiijooyin kala duwan loogu muujin lahaa dad kala duwan sidan:
Markay Martha ka raadinayso buug cunto karin iyada oo loo marayo mashiinka wax raadinta, waxay u badan tahay inay heli doonto buugaagta karinta ee karinta oo gaabis ah natiijooyinka la soo celiyay.
Markii aan ka raadiyo buug-kariyaha adoo adeegsanaya mashiinka raadinta, waxay u badan tahay inaan heli doono Buugga Anarchist Cookbook oo ah natiijo la soo celiyay.
Dhinacyada kale ee farsamada ee laxiriirta isticmaalka iyo waxqabadka websaydhka sida waqtiga xamuulka bogga, ka jawaab celinta iyo helitaanka ayaa ah qodobo muhiim ah oo SEO ah oo hoosta ka xariiqaya isticmaalaha isla markaana ka caawinaya dhisitaanka daacadnimada. Haddii websaydhkaaga aan la geli karin ama ay adag tahay in la raro, dadka isticmaala waxay u badan tahay inay soo boodaan ama marar dhif ah ay la shaqeeyaan.
KPI-yada lagula taliyay inay la socdaan:
Number of xidhiidhada soo socda
Number of xiriiriyeyaal dibedda ah
Mugga gaadiidka gudbinta
Bogga natiijada mashiinka raadinta (SERP) booska go'an gaar ah ee keywords
Muuqaallada bogga halkii kulanba
dega waqti (celcelis ahaan waqtiga bogga)
Warbaahinta bulshada waa marin weyn oo lagu dhiso wacyiga, kalsoonida, iyo daacadnimada. Waxay si weyn ugu egtahay isku xirnaanta xeeladaha haynta SEO / SEM. Lagu taageeray suuqgeynta wax-ku-oolka ah waa albaabkaaga si aad u dhisto u-doodayaal sumcad si aad u sii qoto-dheeraato haynta iyo u-soo-gudbinta tayo sare leh.
Markii lagu jaangooyo jadwalkaaga tifaftirka / daabacaadda ee ujeeddooyinka suuq-geynta SEO haynta oo lagu daro ishtags summad leh iyo raadinta xiriirinta waxay noqoneysaa marin xoog leh oo lagu dhiso daacadnimada macaamiisha.
Waad ka faa'iideysan kartaa ishtags-yada sumadaha leh iyo isku xirnaanta raadinta si aad u ogaato oo aad u sahamiso fursado cusub oo hawlgal ah oo aad ku dhejiso ilaha u doodayaasha calaamadaha suurtogalka ah. Waxay u badan tahay faa iidada ugu weyn ee warbaahinta bulshada inay tahay fursad aad kulaqabsato kartidaada iyo saldhiga macaamiisha jirta waqtiga dhabta ah. Ka faa'iideysiga sheekooyinka iyo wacyigelinta shaqaalahaaga iibka inay u adeegsadaan warbaahinta bulshada qayb ka mid ah adeegga macaamiishaada waa taatikada kaliya ee la iska indhatiro ee cajaa'ibyada ku sameysa dhismaha haynta iyo daacadnimada macaamiisha.
Number of raacsan iyo taageerayaasha
Engagement heerka - labadaba ololaha iyo bogga gaarka ah
Boqolleyda gaadiidka gudbinta laga soo saaray kanaallada warbaahinta bulshada
The mugga maadada lagu riixay iyada oo qayb ka ah qaybinta suuq-geynta
Number of codsiyada adeegga macaamiisha oo dhameystiran iyada oo loo marayo sheekaysiga warbaahinta bulshada, faallooyinka iyo farriinta
E-maylku weligiis ma dhiman doono waana shey hoose oo ka mid ah dhammaan shaqooyinka webka iyo adeegsiga.
Suuq geynta emaylka ayaa inta badan loo adeegsadaa darawal aasaasi ah oo ku haynta isticmaalaha iyo kululee hargab qabow. Laba tab oo ugu caamsan oo loo adeegsado suuq geynta emaylka si loo wanaajiyo la haynta macaamiisha ayaa ah in lagu soo diro wargeysyada wararka ugu dambeeyay iyo waxyaabaha ku saabsan waxyaabaha cusub iyo in lagu soo jiito iibsiga soo noqnoqda iyadoo la siinayo qiimo dhimis iyo heshiisyo macaamiisha jira.
Soo koobitaanka waxyaabaha ku jira mid ka mid ah xeeladahan ayaa lagu jaanqaadi karaa jadwalkaaga tifaftirka si loo helo natiijooyinka ugu fiican marka la eego heerka furan iyo CTR. Waad sii kala jabin kartaa dadaalkaaga qaybinta liisaska emailka iyada oo loo eegayo doorbidaha isticmaalaha, isbeddellada xilliyeed, iyo dadka.
Laakiin suuqgeynta emaylka waa in si taxaddar leh loo wajahaa ka badan kuwa aan soo sheegnay. Xadgudub xad dhaaf ah iyo maarayn liidata ayaa ka heli kara dhamaan liiskaaga oo dhan liiska madow oo si xun u dhaawici kara kalsoonida ilaa hadda la dhisay. Waxa ugu muhiimsan ee halkan lagu xuso ayaa ah in isticmaalehaagu uu ka warqabo sida uu ugu soo galay liiskaaga dirista, sidee ula macaamili doontaa iyo in la siiyay fursad uu ku saxo waxa uu doorbidayo / ka noqdo ama uga baxo xubin kasta daqiiqad kasta.
Markaad go'aansaneysid inaad u adeegsanaysid serverkaaga boostada ama adeega dhinac saddexaad, fadlan tixgeli haddii aad awoodo inaad raacdo dhammaan sharciyada kor ku xusan oo aad awood u leedahay inaad cabirto oo aad la socoto waxqabadkiisa.
Number of emayllada la diray dibedda - olole gaar ah iyo guud ahaanba
Guji illaa heerka (CTR) emayl
Heerka furan ee olole emayl loo diray
Ku celi heerka iibsiga iyada oo loo marayo kanaalka emaylka
La soco, Cabir oo Fiiji Kobaca
Sidaan soo sheegnay, si aad si dhab ah ugu hagaajiso daacadnimada macaamiishaada ee suuq geynta digital, waxaad u baahan tahay inaad fahamto macaamiishaada. Waxaa jira qaabab fara badan oo loogu talagalay falanqaynta macaamiisha si ay u sahamiyaan ulana xiriiraan dadaalka suuqgeyntaada haynta. Abuuritaanka istiraatiijiyad suuqgeynta haynta macaamiisha way ku kala duwanaan kartaa ganacsiyada illaa noocyada laakiin ujeeddooyinka ujeeddooyinka salka ku haya iyaga ayaa xiriiriya.
Qiyaasta qotada dheer iyo falanqaynta la xoojiyay ee qayb kasta oo ka mid ah safarkaaga macmiil waa bilow weyn laakiin waxay ku siin doontaa tan macluumaad aan nidaamsanayn. Qaabka aad uga faa’iideysaneyso xogtan si aad u weydiiso oo aad jawaab uga bixiso su’aalaha gaarka ah ee ku saabsan dhaqankooda wixii ka dambeeya dhammaystirka wareegga iibka ayaa go’aamin doona guushaada ku aaddan dhisidda xiriirro waqti dheer ah oo aad la leedahay saldhiggaaga macmiilka.
Ka haynta ayaa ka soo baxda daacadnimada iyo kalsoonida.
Tags: kanaalada helitaankaheerka cigtaheerka-riixriix-thru heerkaqofka macaamiisha ahAdeegga macaamiishacodsiga adeegga macaamiishamarketing digitalWaqti sii degcabbirista suuqgeynta emaylkaHeerka hawlgalkataageerayaasharaacsanAnalytics googlexidhiidhada soo socdatilmaamayaasha waxtarka muhiimka ahkpicabirrada suuqgeyntaheerka furantaraafikadaxiriiriyeyaal dibedda aharagtida boggabogga aragtida halkii kulanbadadkagaadiidka gudbintaku soo celi heerka iibsigakanaalada hayntacabirrada hayntacabirrada iibkabogga natiijada mashiinka raadintaraadinta cabirrada suuqgeyntaserpcabbiraadaha warbaahinta bulshada
10 Tilmaamood oo loogu talagalay Istaraatiijiyadda Qamaarka Guusha